Hangouts - inona ity programa ity ary ahoana no hametrahana izany?
Hangouts - inona ity programa ity ary ahoana no ampiasako azy?
Ny aterineto dia nanome fahafahana ny olona hifampiresaka na dia tsy misy toerana aza. Misy orinasam-panjakana fanta-daza Google nanolotra ny iraka manokana, nefa vitsy ny olona mahalala izay karazana fandaharana Hangouts. Mora ny mampiasa azy io raha fantatrao ny singa fototra amin'ny toerana.
Inona avy ireo hangino?
Ny fampiharana Google ofisialy dia natsangana ho smartphones vaovao mihazakazaka amin'ny Android , saingy misy ihany koa ny fametrahana azy amin'ny ordinatera. Izy io dia manana enta-mavesatra kely eo amin'ny processeur ary dia miavaka amin'ny fandidiana miorina. Mitadiava izay Hangout amin'ny Android dia tokony hamaritra ireto fampahalalana manaraka ireto:
Ny tanjona fototra dia ny manome karazana fifandraisana virtoaly isan-karazany, ohatra, lahatsoratra sy lahatsary, fizarana sary ary ny sisa.
Ny fampiharana dia tokony hampifandray ireo fitaovana efa misy mba hifandraisana amin'ny Google amin'ny fanomezana vokatra vaovao tsara.
Zava-dehibe iray hafa, izay mendrika ny mandinika - izay ilaina ho an'ny "Hangouts. Ny fampiharana maoderina dia ahitana karazana endri-javatra maro, noho izany dia afaka mifandray amin'ny SMS sy MMS ianao, mamorona chats, izay mety ahitana olona miisa hatramin'ny 150. Amin'ny alalan'ny mpitondra hafatra dia afaka mandefa amin'ny alalan'ny Internet ianao amin'ny alàlan'ny YouTube.som. Fihaonana malaza sy lahatsary, izay afaka mandray anjara amin'ny olona 10. Ny fikarakarana ny karazana fandaharana dia Hangouts, mendrika ny manamarika fa amin'ny alalan'ny fanampiany dia afaka mandefa antso amin'ny nomeraon-telefaona.
Iza no tsara noho ny Hangouts na Viber?
Ny fampitahana amin'ireo iraka roa malaza dia tsy azo alaina, ary raha mandinika ny fahaizan'ny programa tsirairay ianao dia hahita fahasamihafana maro:
Ny fampiharana Hangouts dia mampiasa ny "Fahadisoana roa", izay midika fa raha tsy manaiky ny fifandraisana ianao dia tsy ho afaka mandefa hafatra izy. Ny mpitondra hafatra faharoa dia tsy manana izany.
Tsy azo ampiasaina amin'ny nomeraon-telefaona ny hangouts, ka azo ampiasaina amin'ny fitaovana izay tsy mila karatra SIM izany, ary ny programa faharoa dia tsy mahafeno an'io endri-javatra io.
Viber dia manana tombon-tsoa - raha tsy miala amin'ny fampiharana, dia afaka hitoetra tsy hita maso ianao, saingy tsy afaka manala ny fampandrenesana hita ao amin'ny Hangouts ianao.
Ahoana no fomba hampiasako Hangouts amin'ny Android?
Ireo mpandrafitra dia nanome ny fampiharana tsotra indrindra amin'ny fampandrosoana ary aorian'ny fametrahana azy, ilaina ny mametraka dingana maromaro:
Rehefa alefa ny mpandefa Hangouts, dia omena alalana amin'ny alàlan'ny SMS ny fanomezan-dàlana, izay hahazo code manokana. Ampidiro ao anatin'ny sehatra voafaritra ao amin'ny programa.
Aorian'izany, ny interface interface dia handroba amin'ny Android ary hisy famantarana marobe miseho eo amin'ny ilany ankavanana. Raha hikirakira azy io ianao, dia afaka manangana vondrona ho an'ny fifandraisana, manomboka rohy na horonan-tsary.
Raha, raha eo am-piandohan'ny ilay mpitondra hafatra, ny mihazona rantsantanana iray avy eo ankavia miankavanana, dia misy ny menus misy ny fanovana. Eto ianao dia mifidy ny sata, miasa miaraka amin'ny fifandraisana ary manao fanovana hafa.
Ahoana no fomba hananganana Hangouts?
Ny iraka dia manome ny olona ny zo hanitsy ny asa, ka hanitsy ny fangatahana ho an'ny tenany. Ny singa Hangouts dia hita ao amin'ny menio Settings. Raha tianao, azonao atao ny manova ny sary sy ny sarinao, mizara sary, horonan-tsary ary geo-toerana. Ao amin'ny irak'Andriamanitra dia mora ny mametraka rakitra, manala na manala ny tantaran'ny taratasy. Ireo safidy ho an'ny fampiendrehana dia ahitana ny fampandrenesana ny fisorohana, ny fitantanana ny fifandraisana ary ny tsy firaharahiana na ny fanakanana ny mpampiasa.
Ahoana no hanaisotra Hangouts amin'ny Android?
Raha tsy mandeha ny programa, dia azonao atao ny mamadika izany. Mba hanaovana izany, araho ny torolalana:
Mandehana any amin'ny "Settings" ilay mpitondra hafatra ary fidio "Manager Manager" any.
Amin'ny dingana manaraka, mandehana any amin'ny tabilao "Rehetra" ary efa misy ny anaran'ilay fandaharana ary tsindrio ny "Delete Updates".
Avereno any amin'ny Hangouts ary tsindrio ny "Force stop" ary tsindrio fotsiny ny "Stop" tab. Aorian'io dingana io, ny fampiharana dia nesorina ary tsy hampiasa ny fahatsiarovan'ny fitaovana.
Olona maro no liana amin'ny fomba hanesorana ny Hangouts, noho izany dia azo atao izany miaraka amin'ny zon'ny fototra. Manamafy ny manam-pahaizana fa raha tsy mahazatra ny Android OS ny mpampiasa, dia tsara kokoa raha tsy mety hampidi-doza toy izany.
Teny ofisialy sy ara-barotra
Inona no atao hoe fanabeazana ny olona iray - fomba sy fomba fanabeazana tena
Psychology amin'ny fifandraisana ara-barotra
Ahoana no hianarana ny fomba handrapaka haingana?
Ahoana no hanafoanana ny fiankinan-doha amin'ny Internet?
Fitantanana fotoana ho an'ny vehivavy - ahoana no hitantana ny zava-drehetra?
Inona ny famerenana, inona no ilaina ary ny fomba hanaovana izany?
Ny angano dia angano na zava-misy?
Ahoana ny fomba fananganana kolotsaina amin'ny faniriana?
Grapes "ho fahatsiarovana an'i Negrul"
Ahoana no hanaisotra ny alèin'ny saka?
Firy ny miaraka amin'ny zaza vao teraka?
Tablets ho fitsaboana amin'ny alahelo ao amin'ny tenda
Green lentils - tsara sy ratsy
Fangatahana - akanjo vita amin'ny akanjo
Efitrano ho an'ny zazavavy 10 taona - design
Teboka ho an'ny zazavavy miaraka amin'ny flower organza
Cocoa "Nesquic" - tsara sy ratsy
Sakafo misy menaka
Toeram-pisakafoanana eo ambanin'ny antitra
Paris Hilton - tompon'ny tokotany Chihuahua ho 8000 dolara
Plums amin'ny siroop
Lalao ho an'ny saina sy ny fahatsiarovana
Ny menaka rosemary - fananana sy fangatahana
Ny raozy dia tonga reny fanindroany